Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Kubvumbi 13, 2021
Kanzura weMDC Alliance kuChiredzi, VaGilbert Mutubuki, vanobhadhariswa mari yechibatiso nedare rekuMasvngo pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira vagari vekwaChivi kuti vapandukire hurumende.
Makanzuru akawanda opokana neveruzhinji munyika apo atanga kurambidza vagari kutengesa mabhero mumisika yawo senzira yekudzivirira kupararia kwedenda reCovid-19. Nyanzvi dzinoti uku kuomesera veruzhinji avo vave kupona nekutengesa mabhero embatya sezvo munyika musina mabasa.
Nyanzvi munyaya dzehutano dzokurukurudzira kuti nhomba dziri kubayiwa vanhu munyika dziongororwe zvakadzama kushanda kwadzo zvichitevera mashoko ekuti nhomba dzeku China hadzina simba rakanyanya mukudzivirira chirwere cheCovid-19, uye zvichinziwo nhomba idzi hadzina kutambirwa neWorld Health Organization kuti dzishandiswe kuruzhinji rwevanhu.
Sangano rinomirira vakoti, reZimbabwe Nurses Association, roendesa Health Services Board kumatare edzimhosva richinyunyuta nekwarinoti kubviswa kwemutungamiri waro, VaEnock Dongo, muchikwata chenhaurirano dzemihoro chinobatanidza vashandi nevashandirwi, che Health Services Bipartite Negotiating Panel.
Hurumende ichiri kutsvaga nzira dzekukwezva vekunze vanoda kuuchika mari dzavo munyika kuburikidza nemusika weVictoria Falls Stock Exchange asi makambani akawanda achiti haana chivimbo chekuti anozowana mari dzawo yekunze kana ave kuida.